ရှင်သန်ရန် Hack ပါ – School for Hackers
Posted on February 26, 2016 March 4, 2016 by Starry Sky
ရှင်သန်ရန် Hack ပါ
ဟက်ကာတွေက နည်းပညာအပေါ် စိတ်အားထက်သန်တဲ့ ကျွမ်းကျင်သူများ ဖြစ်ပါတယ်။
“ဟက်ကာ” ဆိုတဲ့ စကားလုံးက အမှန်တကယ်တော့ ရာဇ၀တ်မှုနဲ့ နည်းနည်းမျှမဆိုင်ပါဘူး – ထက်မြက်တဲ့ အင်ဂျင်နီယာတစ်ယောက်က လက်ရှိ ပြဿနာကို ဖြေရှင်းဖို့ နည်းလမ်းသစ်ဖေါ်ထုတ်လိုက်ပြီး၊ ထိုသို့ပြုလုပ်ခြင်းကို ဟက်ကာတစ်ယောက်လို့ သတ်မှတ်ခံရဖို့ ထည့်သွင်းဖေါ်ပြခြင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဤသို့နားလည်မှုအပေါ် တည်ဆောက်ထားတဲ့ ဓလေ့တစ်ခုလုံးကိုတော့ ဒီမှာဖတ်ကြည့်ပါ ။ ။
ကျွန်တော်တို့က သင်ယူခြင်း နှင့် သင်ကြားပို့ချခြင်းအပေါ်နှစ်မြုပ်ထားတဲ့ အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုပါ။ ကျွန်တော်တို့က အသိပညာတွေဟာ လျှို့ဝှက်ထားသင့်တယ်၊ အမှောင်ချထားသင့်တယ် ပြီးတော့ ခက်ခဲနေသင့်တယ်လို့ မထင်ပါဘူး။ စိတ်ဝင်စားသူတိုင်း ဟက်ကင်းကို လိုက်နိုင်နေရမယ်။ ဒါပေါ့၊ ခင်ဗျား စိတ်ပါရင်၊ Linux, bash နဲ့ networking တွေကို လေ့လာလို့ရတာပေါ့။ ဒါပေမယ့် ဟက်ကာတစ်ယောက် ဖြစ်လာဖို့ အဲဒီအရာတွေအားလုံး လိုက်လုပ်နေ ဖို့တော့မလိုပါဘူး။
ကျွန်တော်တို့ မြင့်မားတဲ့ ပညာရေးတစ်ခုကို ဘယ်လိုလေ့လာကြမလဲ စဉ်းစားကြည့်ရအောင် – ခင်ဗျားက အလုပ်အကိုင်ဈေးကွက်မှာ တန်းမ၀င်တဲ့ ကောလိပ်ဘွဲ့ရဖြစ်ဖို့ ချေးငွေတွေထုတ်ပြီး နှစ်ချီပြီး ဆင်းဆင်းရဲရဲနေပြီး အဲဒီဘွဲ့ရချင်ရသွားပါလိမ့်မယ်။ ဒီအစီအစဉ်မှာ ဘယ်သူက ပိုက်ဆံရသွားတာလဲ? အရိပ်အမြွက်။ ။ အဲဒီဘွဲ့က ခင်ဗျားအတွက် ပုံစံထုတ်ထားတာမဟုတ်ပါဘူး။ ခင်ဗျားအနေနဲ့ ခင်ဗျားကို စွမ်းအားတွေပေးနိုင်တဲ့ ပညာရပ်တွေကိုလေ့လာပြီး ထူးချွန်တဲ့ ဟက်ကာတစ်ယောက်ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်၊ စွမ်းအားတွေဆိုတာ ခင်ဗျားကို လိုချင်သူတွေ များလာစေတဲ့ အရာပါပဲ။ တစ်ယောက်ယောက်ကို ခင်ဗျားပညာရေးအတွက် ကုန်ကျခံချင်လာအောင် စွမ်းဆောင်ရင်းနဲ့ စနစ်တစ်ခုလုံးကို ဟက် ပစ်လိုက်ပါ!
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ဟက်ကင်းဆွေးနွေးမှုတွေကို Linux, programming နဲ့ networking တွေအပေါ်မှာပဲ ကန့်သတ်ထားမှာမဟုတ်ပေမယ့် ကျွန်တော်တို့ အဲဒီအကြောင်းတွေ အများကြီးပြောမှာပါ။ ကျွန်တော်တို့ဆီကို အစားအစာတွေကို ဟက်ခြင်း၊ လူနေမှုပုံစံတွေ ဟက်ခြင်း ဘယ်လို ဟက်ကင်းလုပ်ခြင်းဖြစ်ဖြစ် ယူဆောင်လာပေးဖို့ ကြိုဆိုပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့၊ ဒါကျွန်တော်တို့ လုပ်နေတဲ့အရာဖြစ်စ် နေလို့ပါ – သင်ယူဖို့ ဟက်ပါ ပြီးတော့ သင်ကြားပေးဖို့ ဟက်ပါ။
2 Replies to “ရှင်သန်ရန် Hack ပါ”
Previous PostPrevious ခင်ဗျားက သဘောကောင်းလွန်းတဲ့သူလား၊ လုံခြုံရေးကို ဂရုစိုက်တတ်တဲ့သူလား?
Next PostNext Hacking Tips from the Article, “How To Not Get Hacked, According To Expert Hackers”